नयाँ कलरमा बीएस ६ केटीएम डुक २५० मुल्य कति ? - Mitho Khabar
January 23, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नयाँ कलरमा बीएस ६ केटीएम डुक २५० मुल्य कति ?
काठमाडौं : केटीएम २५० बीएस६ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । भारतमा अप्रिल २०२० देखि बीएस६ अनिवार्य हुने भएपछि कम्पनीले डुक २५० बीएस६ सार्वजनिक गर्ने भएको हो । हिजो मात्र कम्पनीले आफ्नो पहिलो बीएस६ केटिएम ३९० एड्भेन्चर मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । केटीएमले हालसम्म अरेन्ज तथा ह्वाइट करलमा मात्र मोटरसाइकल निमार्ण गर्दै आएको छ ।
अब भने मेट ग्रे कलरमा सार्वजनिक हुने अनुमान गरिएको छ । भारतीय शोरुममा मेट ग्रे केटिएम २५० बीएस६ भर्सन देखिएको छ । बीएस६ केटिएम २५० मेट ग्रे, ग्लस ब्ल्याक र अरेन्ज कलरकोे कम्बीनेसनमा अझै स्र्पोटि देखिएको छ। कम्पनीले बीएस६ २५० सार्वजसनिक गर्ने मिति चाडै तय गर्ने जनाएको छ ।
बीएस४ केटिएम २५० भन्दा केहि मूल्यसमेत बढ्ने कम्पनीले बताएको छ। यसमा २४८.८ सीसी, सिगंल सिलिन्डर इन्जिन रहेको छ । यो इन्जिनले ३० बीएच पावर तथा २४ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यसमा बीएस६ इन्जिनका अलावा यसका कलरमा मात्र परिर्वतन गरेको छ भने अन्य कुनै परिर्वतन गरिएको छैन् ।
लकडाउन : घरमै बसेर पढ्न र पढाउन सकिन्छ
April 9, 2020 mithokhabar
एनआईसी एशिया बैंकका डिजिटल बैंकिङ्गका विभिन्न सेवाहरू निःशुल्क